SanHe Great Wall Import iyo Export Trade Co., Ltd.
8 Sano Khibrad Soosaarid
Sidee loo doortaa daahyada 'PVC strip'?
Heerkulka caadiga ah, waxaan soo jeedinaynaa daahyada 'PVC PVC' ee caadiga ah. Heerkulka hoose, waxaan soo jeedineynaa daahyada 'PVC polar'. Aqoon isweydaarsiga, waxaan soo jeedinaynaa Alxanka daahyada ka sameysan ee alxanka ah. Bakhaarka dhexdiisa, waxaan soo jeedinaynaa daahyada xargaha ee 'Ribbed PVC'. Wixii intaa ka badan la doortay, fadlan nala soo xiriir. Isticmaalka Guud iyo Faa'iidooyinka Mashiinka PVC ...
PVC waa tartiib-tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib ah lehna codsiyo kala duwan. Hada waa nooca labaad ee ugu balaaran badeecada balaastigga kaliya marka loo eego polyetylen-ka cufnaanta yar. Waxyaabaha loo qaybin karo alaabada adag iyo alaabada jilicsan: Codsiga ugu weyn ee alaabada adag waa ...
Waa maxay Polyvinyl Chloride (PVC), maxaase loogu adeegsadaa?
Polyvinyl Chloride (PVC) waa mid ka mid ah polymers-ka aadka loo isticmaalo thermoplastic-ka adduunka (waxaa ku xiga kaliya caagag aad u badan oo aad loo isticmaalo sida PET iyo PP). Waa dabiici dabiici ah oo aad u jajaban (ka hor inta aan lagu darin caagaga) balaastik. PVC ayaa ka dheeraaday inta badan caaga ha ...
Waxaan nahay alaab-qeybiye xirfadle ah oo ka kooban badeecado kala duwan oo caag ah iyo Rubber.
Galbeedka XianRen Street, Warshadaha New Park, SanHe, HeBei, Shiinaha.